क्युबोट एक्स smartphone० स्मार्टफोन today १30 को सीमित प्रस्तावको साथ आज सुरूवात गर्दछ! | Androidsis
क्युबोटले ठुलो फोन सुरू गर्‍यो X30 अघि र आज यो ग्लोबल बिक्रीको साथ सुरू हुन्छ जुन तपाईं //१/148,99 जीबी संस्करणको लागि $ १6। र / १$128। को the/२178,99 जीबी संस्करणको लागि पाउनुहुनेछ। तपाईं भेट्न सक्नुहुन्छ AliExpress मा उत्पाद पृष्ठ सीमित कुपन प्राप्त गर्न।
El क्युबोट X30 सुविधाहरू -..6,4 इन्च पूर्ण दृश्य स्क्रीन,-48-मेगापिक्सेल मुख्य क्यामेरा, १२128/२256 जीबी भण्डारण, ,,२०० एमएएच ब्याट्री र एन्ड्रोइड १० अपरेटि system प्रणालीको रूपमा। उही कन्फिगरेसनको साथ, फोन क्युबोट X30 यो Huawei र Xiaomi टर्मिनल भन्दा सस्ता सस्ता छ। यस कारणले गर्दा X100 लाई प्रमुख फोनका रूपमा डब गरिन्छ र X30 को लोकप्रियता यसको प्रक्षेपण पछि बढेको छ।
यसको सेन्सर हाइलाइट गर्दछ
Cubot X30 को हाईलाइट क्यामेरा प्रणाली हो। उपकरणमा सामसु S S5KGM1 48MP मुख्य लेन्स, एक 16-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड-कोण सेन्सर, 5-मेगापिक्सल मैक्रो लेन्स, करीव २-मेगापिक्सलको गहिराइ लेन्स र एक 2-मेगापिक्सल फोटोसेन्सिटिव लेन्स सहित पाँच रियर क्यामेराहरू सहित सुसज्जित छ। । फ्रन्टमा 0,3२ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ। यस उच्च परिभाषा क्यामेरा प्रणालीको साथ, तपाईं कुनै पनि समयमा, धेरै फरक वातावरणको साथ उच्च-गुणवत्ता फोटोहरू क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ।
बिक्रीको अर्को पोइन्ट जुन तपाईंलाई सोच्न लगाउँछ किन्न लायक क्युबोट X30 यसको उच्च प्रदर्शन हो। X30 ०.० GHz अक्टा-कोर MediaTek हेलियो P60 चिपसेट १२ नानोमीटर प्रक्रियामा आधारित छ। यस कम पावर उपभोग चिपसेट 2,0 जीबी र्याम र २12 जीबी आन्तरिक मेमोरीको साथ। यो दुई मोडेलमा उपलब्ध हुनेछ, + जीबी + १२ and जीबी र + जीबी + २8 जीबी।
क्युबोट X30 ले तपाईंलाई NFC मार्फत भुक्तान गर्न अनुमति दिनेछ, एक प्रणाली जुन केहि समयको लागि बिभिन्न बजारहरूमा प्रयोग गरिएको थियो, यूरोपमा पनि। स्मार्टफोन यसको सम्पर्कको लागि सबैभन्दा पूर्ण उपकरणहरू मध्ये एक हो, तर यसले यस खण्डमा मात्र बाहिर निस्कदैन, धेरै अन्यमा पनि, किनकि यससँग वाइफाइ, G जी, ब्लुटुथ र अन्य धेरै छन्।
विश्व प्रीमियर बिक्रीमा फिर्ता, यो Aliexpress मा ब्रान्ड गतिविधि जुलाई २ 27 देखि अगस्ट १, मा सुरु हुन्छ X30 यो केवल दुई कितावहरु मा सबैभन्दा किफायती मूल्य १ sold148.99 - - १178.99.. dollars dollars डलर मा बेचिन्छ। यस पटक कम्पनीले क्युबोट समर्थकहरूलाई यति कम मूल्यमा फर्काउन चाहन्छ, अन्यथा तपाईं यस क्वालिटीको अर्को फोन किन्न सक्नुहुन्न यस्तो कम मूल्य छ कि यो Cubot X30 को रूप मा समान कन्फिगरेसन छ। तसर्थ, यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यसलाई अहिले नै किन्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » क्युबोट एक्स smartphone० स्मार्टफोन today १30 को सीमित प्रस्तावको साथ आज सुरूवात गर्दछ!
शाओमीले यसको भर्खरको प्रमोशनल भिडियोमा ब्ल्याक शार्क S एसलाई आईफोन ११ प्रो अधिकतमसँग तुलना गर्दछ